Yintoni eyenza imfashini ekwindla 2015, iifoto eziyi-100. Okokugqoka ekwindla ka-2015: imfashini yefashoni, ifoto
Silungiselela ukuhlangabeza imvula ekwindla: yintoni eya kufakelwa kwindlalela ka-2015
Abaqambi abadumileyo baqokelela iifowuni zekwindla-ebusika ngo-2015-2016, oku kuthetha ukuba lixesha lokuya kuthengwa kwimizila yakutshanje. Sincoma ukuba ukhumbule ukuba kungekudala ukushisa kwehlobo kuza kutshintshwa yimimoya ebandayo, kwaye ufumane oko kuya kuba sekupheleni kwe-2015.
Yintoni enxiba ngayo ekwindla 2015: imibala yefestile
Iqoqo likaMaha Mara, iGucci, uCloe, Prada, iDolce neGabbana lilawulwa yimbala eluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi, kunye neklasikhi ekwindla - emnyama, emdaka, emnyama. Kwinqwelo yakho, ngaphandle kwale mibala, umbala we-lavender kunye nombala we-cornflower, kunye nesanti kunye nemibala ye-tan, kufuneka ibonakale kwiibanda zokuqala.
Yintoni eyenza imfashini ekwindla 2015: iimpahla kunye nezixhobo
Ulibale ngeebhatyi zesikhumba, khumbula iidyayi ze-suede
Ukuwa kwakho kuya kufudumala kwaye ubumnene, kuba inombolo yombhalo 1 ibonwa njenge-suede! Kwaye naziphi na izinto ze-suede, kungekuphela nje kweengubo zangaphandle, kodwa iingubo, iingubo, iingubo, iifutshane, iikhati, iifesti ziya kuhlala zifanelekileyo.
Sifakwe kwii-ponchos ezikhanyayo kunye neefestile
I-Poncho, kunye neengubo, yinto yonke, iya kuhambelana nabafazi bobabini abaneefomu ezihle kakhulu, kunye namantombazana anomzimba onomzimba. Kwimeko yokuqala, ukuzaliswa kwezandla kunye nephezulu kunokonakala, kwaye kwimeko yesibini, ivolumu iya kwongezwa apho ayanele. Zive ukhululekile ukusebenzisa i-ponchos kunye neefestile ukudala izindebe ezityebileyo, ekwindla kwalo nyaka ezi zinto ziza kuphakama kwefashoni!
I-Nostalgic kwihlobo elidlulileyo
Ngaba ufuna ukuba kwindawo ephakamileyo yomtsalane? Thenga izinto eziza kubakho iintyatyambo, kunye naluphi na uhlobo: ukucwenga, ukusetyenziswa okanye umfanekiso nje kwisityu ngendlela yeentyatyambo.
Nceda uqaphele: kwisaphetha sakho izinto ezinjalo akufanele zigqithise. Vumela "intyatyambo" iyakubhenca okanye i-skirt, kwaye zonke iingubo kunye nezicathulo ziya kuba zizodwa (umzekelo omnyama, umzekelo). Ngaphandle koko, usengozini yokuba "yindlala yebhotile".
Siziva ngathi njengoKumkanikazi uVictoria
Ngendlela ekhoyo kuya kubakho iimfesane kunye neengubo ezenziwe kwi-neo-Victorian style. Ziye zahluke ngobuninzi beengcambu kunye nelayiti, ikollar ephezulu, ukucoceka nokucocwa. Ngaloo nto, ezi zifowuni zibukeka zigcinwe kwaye zifanelane nesitayela senenekazi. Baya kufakwa kwiofisi okanye kwisifundo endaweni yekhati yeklasi okanye i-blouse.
Senza isikhumba esincinci
Ifestile ifaka iimpahla zentathu. Nangona ubukho begama elithi "umthamo" kwigama elithi "i-sleeve", ungakhathazeki, akukho mentimitha engaphezulu kwi-silhouette yakho ayiyi kunyuka. Kunoko! Isinquno sakho siya kuphumelela ngokuchasene nemvelaphi yendlela yokunyuka kwamahlombe, umlinganiselo wakho uya kuba ngowesifazana.
Ukugqithisa kunye nokungaqhelekanga kwimbonakalo yakho kuya kwandisa iintsiba. Ewe, imifanekiso yemihla ngemihla ayinakusetyenziswa kuyo nayiphi na imeko, kodwa ukubonakala kwihlabathi - kunokwenzeka. Kwimicimbi yentlalontle okanye iqela, ngokuqinisekileyo awuyi kubonwa! Iintsike ziyakwazi ukugubungela loo nto (iingubo eziqhelekileyo ziza kulezo ndlela) okanye zibe nje ukugxila (kwimikhono okanye phantsi komgca njengemida).
Ukulumkisa: iingubo ezimelela i-cooon eqinileyo yeentsiba, aziyi kuhamba kakuhle. Amantombazana amade kwaye azincinci angakwazi ukufumana isitayela esinjalo.
Ngaba ucinga ukuba abafana kuphela abavela kwintshona yasendle? Kwaye akukho apha! Qinisekisa into echaseneyo: xabisa iimilo zobungcali kwiimodeli. I-Fringe ingahlobisa izinto zombini kunye nezixhobo.
Sifumana ngobumntu ubufazi
Ukususela ngoko, njengoko abayilimbi beboleke imimiselo yendoda yokugqoka iingubo zowesifazane, ukuthandwa kwabo akuyiyo ephantsi. Kuthe malunga neengubo ezigqithiseleyo, kunye neebhulukhwe ezivulekileyo, kunye neebhatyi ezinomqolo weboya ngomoya weebhatyi.
Uthakazo lwabo kukuba ukubonakalisa ulwaphulo-ngokwesondo, banokumangalisa ngokumangalisayo ubufazi kunye nobulili babanikazi babo.
Sifakwe kwindawo ebandayo
I-Scarf ekwindeni akukho mntu uyamangalisa. Kodwa inqanaba yomnxeba - isaphila ... Hlala ukhumbule ukuba ukufikelela okunjalo kufuneka kugqitywe ngezinto ezenziwe ngeboya okanye kwi-cashmere, kwaye kungekhona ngeemveliso zobumvu.
Ngoku uyazi oko kuya kufakelwa ngekwindla ka-2015. Siyathemba ukuba ngeengubo ezintle ipeyinti yindlaphu iya kukudlula.
Ifom yehlobo: uhambo lwe-safari-stylish-2017
I-TOP-4 iindwendwe zesetyhini zasehlobo-2017
Izambatho zangaphandle eziphathekayo kubasetyhini kunye namadoda, ngo-2015
Ubomi obudibeneyo kwimbono yabantu
Yintoni evelelekayo ekwindla-ebusika ngo-2016-2017 yabaselula
Kutheni abafazi bathanda ukumanga?
Makhe sithethe ngeempawu zonyango zommbila
Indlela yokucoca isisu ngaphandle kokuhlinzwa
Iphareji yebhali neenkukhu kunye neengqimba kwi-multivark